Imibhalo ka-Adam Small ethi Martech Zone |
Imibhalo nge U-Adam Encane
Nayi eminye imisebenzi yakho yasekhaya ngaphambi kokuthi ufunde lokhu. Ayini amaphesenti akho wokuguqulwa okwenzeka ngeselula nangedeskithophu? Ku-Google Analytics, khetha Ukuguqulwa> Izinjongo> Ukuguqulwa bese ukhetha iTraffic Traffic eqenjini lakho lokuqala kanye ne-Non-Mobile Traffic ngesekhondi lakho: Ayini amaphesenti akho omgwaqo owenzeka ngeselula nangedeskithophu? Ku-Google Analytics, khetha Izethameli> Ukubuka konke bese ukhetha iTraffic Traffic eqenjini lakho lokuqala kanye Ne-Non-Mobile Traffic ngesekhondi lakho: Isibonelo engikuso
NgoLwesine, Septhemba 22, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 U-Adam Encane
Izinkampani zitshala imali eningi ekuthuthukiseni uhlelo lokusebenza lweselula. Nomaphi lapho izigxobo ziphakeme khona, kubonakala sengathi inkohliso iyalandela. Ngokombiko omusha ovela ku-DeviceRank, ukufakwa kwe-Mobile App nokukhwabanisa kuzobiza abakhangisi kuze kufike ku- $ 350 million ngo-2016 AppsFlyer's State of Mobile App Install & Engagement Fraud kusekelwe kubuchwepheshe benkampani i-DeviceRank ™ - okuyiyona ndlela yokuqala yokuvikela ukukhwabanisa khipha ukukhwabanisa ezingeni ledivayisi – futhi kuhlanganisa izigidi ezingama-500
Ngenkathi ezinye iziteshi ziqhubeka zithandwa kakhulu, kunesiteshi esisodwa sezokuxhumana esiqhubeka sigqame ngokumangazayo kuzo zonke iziteshi uma kukhulunywa ngokushayela ithrafikhi yezitolo, iminikelo engenzi nzuzo, nokubandakanya ngokushesha. Leso siteshi sithumela umyalezo weselula nge-SMS. Izibalo Zokumaketha ze-SMS Imiyalezo ebhaliwe nge-SMS inesilinganiso sokufundwa semiyalezo engu-98% 9 kwengu-10 evulwa kungakapheli imizuzwana emi-3 yokutholwa kwabantu abangama-29% ababhekiswe ukungena nge-SMS
I-mobile landscape iyaqhubeka ngokuqhubekayo, futhi kuphela abathengisi abahambisana nezinguquko futhi abazifaka kumasu abo wokuphromotha nokuzibandakanya abeka ithuba lokuphumelela ezweni lanamuhla elincintisana kakhulu. Ubuchwepheshe bamuva bokwenza kube bukhulu yi-Near Field Communications (NFC). Kuyini i-Near Field Communications? I-Near Field Communications ubuchwepheshe obufakwe kumadivayisi akamuva eselula avumela ukuxhumana okuphephile (ngesiqinisekiso) phakathi kocingo lweselula ne
Ngenkathi sakha i-Agent Sauce ehlanganisa amasayithi, ukuhlanganiswa kwe-IDX, izinkambo, izinkambo zeselula, ukuvakasha kwevidiyo, ukumaketha nge-imeyili, ukuthumela imiyalezo nge-SMS nokuphrinta, besazi ukuthi ukumaketha okuqukethwe kuyisihluthulelo sokushayela ukuthengisa okuningi kuma-ejenti. Futhi, akumangazi ukuthi, abasebenzeli bethu abasebenzisa ipulatifomu babona ngokugcwele impendulo enkulu kakhulu namanani asondele. Ukumaketha kokuqukethwe akuyona nje i-buzzword noma isu elithile lokumaketha elingavunyelwe, liyasebenza. Eqinisweni, ukumaketha kokuqukethwe kukhonjisiwe ukuthi kukhiqiza cishe
Abasebenzisi be-intanethi abayi-2.4 billion emhlabeni wonke kanti ama-70% abo asebenzisa i-inthanethi nsuku zonke. Lokho kungu-37.3% wabantu bomhlaba… ukwanda ngama-566% kusukela ngonyaka ka-2000. Inani lamadivayisi eselula asetshenziselwa ukufinyelela kwi-Intanethi liphindwe kabili, ngama-38% wokuxhumana nabezindaba nsuku zonke okwenziwa kuma-smartphone. Amawebhusayithi amasha ayi-139,000 abukhoma futhi ama-imeyili ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-144 athunyelwa… ama-imeyili angama-68.8% angogaxekile! IGoogle isalawula imakethe yokusesha ngama-88%